टुसाएको चना एति धेरै लाभदायक…हेर्नुहोस् । पूरा पढी सेयर गर्नुहोस । – yuwa Awaj
च’ना कमजोरी हटाउन, ता’कत र ऊर्जाका लागि निकै फाइदाजन’क मानिन्छ। साँची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालयका आ’युर्वेद डा अखिलेश सिंहका अनुसार चना सबैभन्दा सस्तो र बदामभन्दा पनि धेरै असरदार हुन्छ । कि’शोरावस्था र युवावस्थामा रहेकाले नियमित रुपमा भिजाएको चना खानुपर्छ ।
यसले प्रजनन क्षमता विकास गर्नुका साथै शरिरमा ताकत आउँछ । कसरी गर्ने चनाको प्रयोग ? डा सिंहका अनुसार राती एक मुट्ठी चना लिनुहोस् र सफा गर्नुहोस् । त्यसबाट किरा लागेको, नभिज्ने कडा चनालाई निकाल्नुहोस् र सफा चनालाई धोएर एक गिलास सफा पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् । बिहान फ्रेश भएर व्यायामपश्चात् यी चनालाई राम्रोसँग चपाएर खानुहोस् र चनाको पानी पनि पिउनुहोस् । च’नाको मात्रालाई बिस्तारै आफ्नो तौल र व्या’यामको हिसाबले बढाउँदै लान सकिन्छ।
१) भिजाएको चनालाई बिहान खाली पे’टमा मज्जाले चपाएर खानुहोस् । चनाको पानीमा १ चम्चा मह घोलेर पिउनुहोस् । यसको फाइदाः यसले कमजोरी हट्छ । वी’र्यको संख्या वृद्धि गर्दछ । वीर्य गाढा हुने गर्दछ । २) एक मुट्ठी चनासँगै पाँचवटा बदाम भिजाउनुहोस् । बिहान मज्जाले चपाएर खानुहोस् त्यसपछि एक गिलास मनतातो दुध पिउनुहोस् । यसको फाइदाः यसले ताकत र ऊर्जा प्रदान गर्दछ ।
मांसपेशी बलियो हुन्छ । ३) रातभरी भिजाएको एक मुट्ठी चनालाई बिहान सख्खरसँग मज्जाले चपाएर खानुहोस् । यसको फाइदाः यसको सेवनले र’क्तअल्पत्ता हुन दिँदैन । रो’गबाट लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । रुघा–खो’कीबाट बचाउँछ । ४) भिजाएको चनालाई बिहान शुद्ध घ्यूमा भुटेर खानुहोस् र एक गिलास मनतातो दुध पिउनुहोस् । यसको फाइदाः यसले हरेक प्रकारको कमजोरीलाई भगाउँछ । ताकत बढाउँछ । तौल बढ्न सहयोग गर्दछ ।
प्रोटिनको अभावमा तपाइकाे शारीरिक विकास राम्रोसँग हुँदैन । प्रोटिन अभाव भएको सङ्केत थाहा पाउन सके त्यसको समाधानको उपाय अपनाउन सकिन्छ । प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु: शरीरलाई स्व’स्थ राख्न फ्याट, सो’डियम, पो’टासियम, का’र्बोहाड्रेट, सुगर, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन र प्रोटिनको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ । यी सबैको सन्तुलनले नै शरीरलाई स्वस्थ राख्दछ । यी सबैमध्ये हड्डी, मां’सपेशी र मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि प्रोटिन अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो ।
हरेक पोषक तत्त्वझैं शरीरलाई प्रोटिनको पनि निश्चित मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर, प्रोटिन धेरै हुनु अथवा कम हुनु दुवै स्वा’स्थ्यको लागि हानिकारक छ ।विशेषगरी यसको कमीले मानिसको शरीर कमजोर हुनुका साथै अन्य समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । यो पर्याप्त मात्रामा नहुनाले मां’सपेशी र हड्डीका साथै मु’टुसम्बन्धी अुनेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसको कमीले शरीरमा यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् :
कपाल कमजोर हुनु: तौल कम हुनुका साथै प्रोटिनको कमीले कपाल पनि कमजोर हुँदै जान्छ । कपाल पलाउन पनि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनको कमीले कपाल कमजोर हुने, कपालमा हाँगा पलाउने, झर्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छ । त्यस्तै, नङ कमजोर हुनुले पनि शरीरमा प्रोटिनको कमी भएको सङ्केत गर्छ । श’रीरमा एडेमा(पानी फोका) हुनु: प्रोटिनको कमीले एडेमा अर्थात् शरीरको केही भागमा पानी फोका देखिन सक्छ । प्रोटिनले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित राख्ने भएकाले यसको कमी भएमा शरीरमा पानीको मात्रा असन्तुलित हुन गई यस्ता समस्या देखा पर्छन् । विशेषतः हातपाउमा यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
प्रोटिनको कमी हुँदा के हुन्छ ? पातलो रौँ – शरीरको रौँ’को मोटाई वंशाणुगत हुने भए पनि प्रोटिनको अभावमा रौँ पातलो हुन्छ । शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन जाँदा शरीरले रक्षात्मक उपाय अपनाएर रौँ, नङलाई प्रोटिन आपूर्ति गर्न छाड्छ ।
यसैकारणले नङ र रौँको स्वास्थ्य बिग्रन्छ । यसैले रौँ र नङको स्वा’स्थ्य अवस्थाले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा दर्साउँछ । आँखा सुन्निने: प्रोटिनको अभाव भएको अवस्थामा र’गतमा प्लाज्मा प्रोटिन कमी हुन्छ । क’लेजोले पर्याप्त मात्रामा फलाम तत्व सञ्चय गर्न नसक्दा यसरी प्लाज्मा प्रोटिन कम हुने हो । फलाम तत्वको कमी भएर हेमोग्लोबिनको उत्पादन घट्छ र रक्तअल्पता भएर आँखा सुन्निन्छ । थकान: प्रोटिन कम हुँदा शरीर थकित हुन्छ किनभने शरीरले पर्याप्त ऊर्जा पाउँदैन ।
शरीरमा चिनीको मात्रा प्रोटिनको सहयोगमा व्यवस्थित हुन्छ । यसैले प्रोटिनको पर्याप्त मात्रा भएन भने दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र थकान महसुस हुन्छ । मांसपेशी क्षय हुनुले प्रोटिनको कमी देखाउँछ । प्रोटिनको अभाव भएमा मांसपेशीको आकार कम हुन थाल्छ ।
भोक लाग्नु प्रोटिनको आभावमा भोक धेरै लाग्छ । विसन्चो हुनु: स्वस्थ मानिसमा पनि प्रोटिनको आभाव भएको अवस्थामा बारम्बार बिरामी पर्न थाल्छ । शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन आवश्यक पर्छ ।
रातो र’क्तकोष, सोतो रक्तकोष र एन्टिबडीको आधार प्रोटिन हो । यी सबै पक्षले मिलेर शरीरमा रोगाणु नाश गर्ने काम गर्छन् । झाडापखाला: झाडापखाला लाग्नु भनेको पाचन प्रणाली बिग्रनु हो । यस अवस्थामा आन्द्राले पोषक तत्व राम्रोसँग अवशोषित गर्न सकेको हुँदैन र शरीरमा प्रोटिनको कमी हुनजान्छ ।
Prevफर्सीको मुन्टा मिठो मात्र हैन छन् अनेकौँ फाइदाहरु…हेर्नुहोस्
Nextनायक आकाश श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिनमा सियोना नानीको लागि गरे १ लाख १७ हजार सहयोग…उहालाई उच्च सम्मान ।